Mitolona hiaro ny sehatra maitso sisa tavela ao an-tanàna ireo mpiaro ny tontolo iainana ao Torkia · Global Voices teny Malagasy
Sehatra maitso sisa tavela farany ao Istanbul ny Alan'i Validebağ
Voadika ny 27 Septambra 2021 4:44 GMT
Mponina eo an-toerana manadio ny valan-javaboahary. Pikantsary avy amin'ny Center for Spacial Justice video. 23 Septambra 2021.
Anisan'ireo sehatra maitso sisa tavela ao Istanbul ny Validebağ Grove (Validebağ Korusu). Miorina amin'ny ilany Anatoliana ao Istanbul, fonenan'ny karazan-kazo tsimanampaharoa, vorona mpifindrafindra monina ary tranobe mana-tantara maromaro ny ala. Nomena ny anarana Toerana Voajanahary sy Mana-tantara Kilasy Voalohany izany. Ary koa nanomboka ny taona 2014, miady mba hampisy ireo tetikasam-pandrosoana any anaty ala ny Antokon'ny Fampandrosoana sy ny Rariny (AKP), ka mahatezitra mafy ireo mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Ny tolo-bidy farany indrindra dia mahakasika ny kaominina Üsküdar, tohanan'ny AKP, izay niditra ny ala tamin'ny 21 Septambra, miaraka amin'ny fitaovana fanariana fasika sy fakofakon-javatra, araka ny tatitry ny Gazete Duvar. Miantso ny fikasana farany indrindra ho “famonoana ny lalàna sy ny natiora” ireo mpanao fihetsiketsehana.
Saingy milaza ny Kaominina fa manatanteraka fotsiny ny “tetikasa fanajariana ny tany sy fanarenana” natomboky ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Fanajariana ho Tanan-dehibe sy ny Antokon'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana (AKP) an'ny kaominina Üsküdar izy.
Tsy vao sambany ity ala ity no lasa lohahevitra mafana noho ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ireo vondrona mpiaro ny tontolo iainana eo an-toerana, ireo mpilatsaka an-tsitrapo ary ny antoko eo amin'ny fitondrana. Tamin'ny taona 2014, nanatontosa hetsi-panoherana ny mponina ary nametraka fitoriana rehefa nanolo-kevitra ny kaominina fa hanangana moskea vaovao ao amin'ny sehatra maitso. Nilaza ny mpanohitra fa efa trano itoeran'ireo moskea 26 ny faritra tamin'izany. Nanome baiko hanajanonana ny fanorenana ihany nony farany ny kaominina- saingy vetivety ihany. Navoaka ihany nony farany ny didim-pitsarana taorian'ny fampiakarana raharaha nataon'ny Kaominina Metropolitan Istanbul, araka ny tatitra nataon'ny Hurriyet Daily News tamin'izany fotoana izany.
Tamin'ny taona 2018, natolotra ho an'ny faritra ny tetikasa vaovao, “Zaridainam-pirenena“. Nijanona ny tetikasa noho ny ezaka avy amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Tamin'ny taona 2020, nanome tany 261.000 metatra toradroa amin'ny faritry ny ala ho an'ny kaominina (tanàna) ny Filan-kevitry ny Kaominin'i Üsküdar izay lazaina fa ho an'ny tanjona fikolokoloana sy fikarakarana.
Tamin'ny volana Jona 2021, taorian'ny fitsidihana ny ala, nanambara drafitra ho an'ny “tetikasa fanajariana ny tany sy fanarenana” ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fanaovana ho Tanan-dehibe, Murat Kurum.”Nahitana fametrahana bozaka maintso 88 decares mba hisian'ny fijanonan'ny fiara, lalana fitsangantsanganana an-tongotra, teatra an-kalamanjana ary toeram-pivarotana sakafo eo am-pidirana, ankoatra ny zavatra manintona hafa ilay tetikasa. Nisy ny fankalazana fohy ny fandresena rehefa namoaka fanapahan-kevitra ny fitsarana raharaham-panjakana tamin'ny volana jolay fa hiteraka «fahasimbana tsy azo sitranina» ao amin'ny ala ilay tetikasa. Telo volana taty aoriana, mbola niroso tamin'ny drafi-panorenana ihany ny kaominina.
Nambenan'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo Validebağ sy ny Fiarovana Validebağ ny valan-javaboary ary nizara vaovao farany tamin'ny alàlan'ny kaonty media sosialy. Ireo vondrona roa ireo no nampandre ny besinimaro fa niditra tao amin'ny valan-javaboary nanary fakofakon-javatra ny kaominina tamin'ny 21 septambra.
Nidina vao maraimbe tao Validebağ! ny ben'ny tanànan'i Üsküdar, Hilmi Türkmen niaraka tamin'ny polisy, namono ny natiora sy ny lalàna! Tsy avelantsika ny toe-tsaina mamadika ny ala ho toeram-panariana fako. Tsy amin'ny ambenanay!
Nesorin'ny kaominina ihany nony farany ireo fitaovana tao amin'ny valan-javaboahary. Na izany aza, mbola miantso fanohanana foana ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Niresaka tamin'ny Bianet, nilaza i Arif Belgin avy ao amin'ireo Mpilatsaka an-tsitrapo Validebağ fa “Miantso ny rehetra izay mankafy ny natiora sy ny zava-maitso izahay mba ho avy eto. Famonoana izao. Manantena ny rehetra hiaro an'i Validebağ izahay.
Tsy mba nametraka ny sehatra maitso na ny politikan'ny tontolo iainana ho laharam-pahamehana ny Anton'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana. Ny famoretana tamin'ny taona 2013 nihatra tamin'ny vondrona mpiaro ny tontolo iainana miezaka manakana ny fanimbana ny sehatra maitso hafa indray ao, Gezi Park, no andrana farany ho an'ny fitondrana, manamarika ny tsy fitiavan'ny AKP ny tontolo iainana
Valan-javaboaharin'i Gezi tamin'ny taona 2013, ary ny Alan'i Validebağ ny taona 2021, tsy lazaina intsony ireo toerana kely kokoa sy trano fonenana izay noravaina na nosimbaina teo anelanelan'izany. Saingy mitohy hatrany ny tolona hiarovana ny sehatra maintso sisa tavela sy ny tontolo iainana. Ny fanontaniana dia hoe hihaino ihany ve ny governemanta amin'ny farany?